रुसमा नाभाल्नीको समर्थनमा प्रदर्शन- विश्व - कान्तिपुर समाचार
रुसमा नाभाल्नीको समर्थनमा प्रदर्शन
नाभाल्नीका प्रवक्ता र वकिलसहित दर्जनौं पक्राउ
माघ १०, २०७७ (एजेन्सी)
मस्को — रुसको जेलमा रहेका विपक्षी नेता एलेक्सी नाभाल्नीको समर्थनमा गरिएको देशव्यापी प्रदर्शनका क्रममा शनिबार दर्जनौं प्रदर्शनकारीलाई गिरफ्तार गरिएको छ । प्रहरीले मानिसलाई घरभित्रै बस्न चेतावनी दिएको बीबीसीले जनाएको छ । नाभाल्नीका नजिकका सहयोगीहरूलाई भने शनिबारको प्रदर्शन सुरु हुनुअघि नै पक्राउ गरिएको थियो ।
जर्मनीबाट गत आइतबार देश फर्केका नाभाल्नीलाई विमानस्थलबाटै पक्राउ गरिएको थियो । जसका कारण उनका समर्थकहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोध प्रदर्शन आयोजना गरेका हुन् । उक्त प्रदर्शन रुसका ६० सहरमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।
४४ वर्षीय नाभाल्नी रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका कडा आलोचक हुन् । सरकारी भ्रष्टाचारको भण्डाफोर गर्दै आएका नाभाल्नी कैयौंपटक जेल परिसकेका छन् । गत जुनमा संविधान सुधारका लागि रुसमा भएको चुनावलाई उनले ‘कू’ को संज्ञा दिएका थिए । उक्त चुनावले पुटिनलाई थप दुई राष्ट्रपति बन्ने बाटो खोलिदिएको थियो ।
सन् २०१८ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा उनी उम्मेदवार बन्ने दौडमा थिए । तर उनलाई आर्थिक हिनामिनाको आरोप लगाउँदै उम्मेदवार बन्नबाट वञ्चित गरिएको थियो ।
पछिल्लो समय रुसी अधिकारीहरुले नाभाल्नीविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको र उनी छिट्टै जेल जान सक्ने चेतावनी दिइरहेका थिए । उनले ५० लाख अमेरिकी डलर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाइएको छ । तर नाभाल्नीले आफूलाई फसाउने उद्देश्यले आधारहीन आरोप लगाइएको बताउने गरेका छन् । रुसी अधिकारीले नाभाल्नीलाई डिसेम्बरमै हाजिर हुन निर्देशन दिएका थिए ।
निडर स्वभावका ब्लगरको समेत छवि बनाएका नभाल्नीलाई सामाजिक सञ्जालमा लाखौं रुसीले पछ्याउँछन् । सन् २०२० मा उनका केही समर्थकहरू साइबेरियाको स्थानीय निर्वाचनमा निर्वाचितसमेत भएका थिए ।
उनले पिएको चियामा षड्यन्त्रपूर्वक विष घोलिएको उनका समर्थकहरूले दाबी गरेका छन् । उक्त आक्रमण रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको योजना भएको उनको दाबी छ । तर क्रेमलिनले आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरिसकेको छ ।
नाभाल्नीको आरोपलाई केही खोज पत्रकारहरूको अनुसन्धानले सही भएको देखाउँछ । लामो समयसम्म उनलाई रुसी अधिकारीले कुनै वास्ता गरेनन् । पछिल्लो समय पनि रुसले उक्त घटनाबारे अनुसन्धान गर्नुभन्दा उनलाई पक्राउ गरेको छ ।
नाभाल्नीलाई जेल हालेपछि सरकारी अधिकारीहरुले उनका समर्थकलाई दबाब दिन थालेको छन् । उनको लोकप्रियता बढ्दै गएकाले सत्ता परिवर्तन हुने गरी जनआन्दोलन हुन सक्ने क्रेमलिनको डर छ । तत्कालका लागि त्यस्तो नदेखिएको भए पनि रुसमा बढ्दो आर्थिक समस्याले कुनै बेला नागरिकले परिवर्तन चाहन सक्ने ठानिएको छ । त्यसका साथै नाभाल्नीले आफ्ना भाषणहरुमा पुटिनले गैरकानुनी ढंगले खर्बौ सम्पत्ति थुपारेको आरोप लगाएका छन् ।
गत सेप्टेम्बरमा सम्भावित विष आक्रमणपछि नाभाल्नीलाई उपचारका लागि जर्मनी पुर्‍याएको थियो । तर देश फर्कने क्रममा उनलाई विमानस्थलको पासपोर्ट नियन्त्रण कक्षबाट प्रहरीले हिरासतमा लिएका थिए ।
रुसी सञ्चारमाध्यमका अनुसार प्रदर्शनमा अन्य कैयौं अभियानकर्मीसमेत पक्राउ परेका छन् । नाभाल्नीका प्रवक्ता किरा यार्मासलाई प्रदर्शनसम्बन्धी कानुन तोडेको आरोपमा पक्राउ गरिएको छ । उनका एक वकिल ल्युबोभ सोबोलसमेत गिरफ्तार भएका छन् । नाभाल्नीको श्रीमती युलियाले आफू, आफ्ना सन्तान, समान मूल्य र मान्यता तथा नाभाल्नीका लागि मस्कोका प्रदर्शनमा सहभागी हुने जनाएकी थिइन् ।
प्रकाशित : माघ १०, २०७७ २१:१६
आर्सनल एफएकपबाट बाहिरियो
माघ १०, २०७७ एजेन्सी
लन्डन — बलियो साउथ ह्याम्पटनले शनिबार डिफेन्डिङ च्याम्पियन आर्सनलको एफएकप चुनौती समाप्त पारेको छ । आत्मघाती गोलको मद्दतले साउथ ह्याम्पटन १–० ले विजयी रह्यो ।
लगातार आक्रमण बुनिरहेको साउथ ह्याम्पटनका केली वाल्कर्सको क्रसलाई २४ औं मिनेटमा ग्याब्रिएलले आफ्नै पोस्टको दिशा दिए र आर्सनले गत सिजन जितेको उपाधिको रक्षा गर्न असफल रह्यो ।
लयमा फर्कने प्रयासमा रहेको आर्सनलले ५ सय ८ मिनेटको खेलयता विपक्षीलाई गोलको अहिलो अवसर दिएको यो नै हो । पछिल्ला सात खेलमा पनि आर्सनलको यो पहिलो हार हो ।
अब साउथ ह्याम्पटनले प्रतियोगिताको अर्को चरणमा इंग्लिस प्रिमियर लिग प्रतिद्वन्द्वी उल्भ्सको सामना गर्नेछ । उल्भ्सले यसअघि गैर लिग क्लब चोर्लीलाई शुक्रबार १–० ले हराएको थियो ।
प्रकाशित : माघ १०, २०७७ २०:३३
‘बलात्कारको आरोप’ ले अस्ट्रेलियाली राजनीतिमा तरंग
बंगलादेश ‘इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ मा सामेल नहुने
अफगानिस्तानमा तीन महिला सञ्‍चारकर्मीको हत्या
नाइजेरियामा अपहरणमा परेका २७९ छात्रा मुक्त
ट्रम्पले राजनीतिक पार्टी नखोल्ने
जापानसँग वार्ता गर्न कोरिया तयार
‘बदनियत’ बारे मौन अदालत
शंकर तिवारी फाल्गुन १९, २०७७
संसद् विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेसँगै नेपाली राजनीतिमा देखा परेको मुख्य गतिरोध केही हप्ताका लागि साम्य भएको छ । कोमामा पुगेको संसद्लाई सर्वोच्चको फैसलाले ब्युँताएको...
रवीन्द्रभक्त प्रधानांग फाल्गुन १९, २०७७
तत्र चक्षुः श्रोत्रं घ्राणं रसनं स्पर्शनम् इति पञ्च इन्द्रियाणी । मानव जातिले पाएका यी पाँच इन्द्रिय (आँखा, कान, नाक, जिब्रो र छाला) मध्ये कुनै एकमा समस्या...
प्रदेश कानुन कागजमा मात्रै
अमृता अनमोल फाल्गुन १९, २०७७
सामाजिक संघसंस्थालाई एकत्रित गरी अनुगमन र नियमन गर्न भन्दै २०७६ वैशाखमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले संघसंस्था दर्ता ऐन बनायो, जसले त्यो...
उत्तरका नाका किन बन्द ?
सम्पादकीय फाल्गुन १९, २०७७
हालका वर्षहरूमा नेपाल–चीन सम्बन्धमा महसुस नै हुने किसिमको कुनै उतार देखिएको छैन । चीनले नेपालविरुद्ध घोषित नाकाबन्दी लगाएको पनि छैन, लगाउनुपर्ने कारण पनि देखिँदैन । उसले नेपाललाई...
राजाराम गौतम फाल्गुन १८, २०७७
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्ला दुई दिनमा गरेका दुईवटा कर्म एक–अर्कामा विरोधाभासी देखिन्छन् । सोमबार उनले पोखरा पुगेर भने, ‘ममाथि शारीरिक हमला नै भयो, कतै...
‘भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिनँ !’
बलराम केसी फाल्गुन १८, २०७७
‘दोहोर्‍याएर भन्छु— भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिनँ !’ यो भनाइ कुनै दार्शनिकको होइन । यो भनाइ कुनै कवि वा साहित्यिक व्यक्ति वा समाजसेवीको होइन । यो भनाइ नेल्सन मन्डेला...
राष्ट्रिय दलित आयोगले गर्नुपर्ने काम
सुशील बीके फाल्गुन १८, २०७७
राष्ट्रिय दलित आयोगले संवैधानिक हैसियत प्राप्त भएको पाँच वर्षपश्चात् बल्ल पूर्णता पाएको छ । यद्यपि मधेसी दलित, मानव अधिकार र विकासका क्षेत्रमा काम गरेका विज्ञ व्यक्तिको...
सम्पादकीय फाल्गुन १८, २०७७
मुलुक राजनीतिक संक्रमणमा रुमल्लिरहेका बेला गत साता संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपालका विषयमा गरेको एक सिफारिसले उत्साहको सञ्चार गरेको छ । राष्ट्र संघको विकास नीति समिति (सीडीपी) ले...
सरिता तिवारी फाल्गुन १७, २०७७
फागुन ७ गते प्रतिगमनविरुद्धको बृहत् नागरिक प्रतिरोध कार्यक्रम ‘टुँडिखेल मार्च’ का क्रममा भेटिएका एक पत्रकार साथीले सोधे, ‘के नेपाली समाजको मूल धारा अग्रगमनकारी छ ?...
अपडेटः बुधबार, १९ फागनु, २०७७ । १२ : ०० बजे